Imbila yasePyrenean isengozini ngenxa yokwehluka okuphansi kofuzo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imbila yasePyrenean isengozini ngenxa yokwehlukahluka kofuzo okuphansi
Ukuguquka kwesimo sezulu inemiphumela emibi ezintweni eziningi ezibeka impilo eMhlabeni, kufaka phakathi ukwehluka kofuzo. Sazi kahle kamhlophe ukuthi amazinga okushisa emhlabeni wonke ayenyuka ngenxa yokwanda kokukhishwa kwegesi embonini nasezokuthutha emhlabeni wonke.
Lokhu kukhuphuka kwamazinga okushisa kweplanethi kunezingozi ezithile eziguquguqukayo ezibeka isimo semvelo ehlukene yomhlaba wethu. Ukuhluka okufana namazinga okushisa, i-asidi yamachibi, ukusweleka kwamanzi ahlanzekile kanye nokwahlukana kwezindawo zokuhlala yilokho anciphisa ukuhlukahluka kwemvelo.
1 Ukuhlukahluka kofuzo kuthinta kanjani ukujwayela ukuguquka kwesimo sezulu
2 Kuthiwani ngezimbila ePyrenees?
3 Umsuka kanye nemiphumela yokwehluka okuphansi kofuzo
Ukuhlukahluka kofuzo kuthinta kanjani ukujwayela ukuguquka kwesimo sezulu
Ezimvelweni zemvelo kanye ne-anthropized ecosystems, zonke izindlela ezenza izinto zisebenze kahle kuhlobene. Ngokubanzi, konke okwenza imvelo isebenze njengoba sibazi namuhla ngamaketanga nobudlelwano phakathi kwezidalwa eziphilayo nezidalwa ezingenalutho.
Ukuze uvumelane nemiphumela emibi futhi emibi yokuguquka kwesimo sezulu, kudingeka ukwehluka okukhulu kofuzo okuvumela lokho yenza izinguquko ku-DNA ukwazi ukubekezela futhi usinde kuzinguquko emvelweni. Njengoba inani lezinhlobo ezithile zezilwane nezitshalo lincipha, baba sengozini kakhulu ezimweni zemvelo. Isibonelo, izinhlobo zezitshalo ezidinga amazinga okushisa aphansi zivame ukushintsha ububanzi bazo ezindaweni eziphakeme kakhulu njengoba amazinga okushisa enyuka ezindaweni eziphansi ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu.
Ngakho-ke, zombili izinhlobo zezilwane nezitshalo zimelana kakhulu futhi zinokuzivumelanisa okulula nokushintsha kwesimo sezulu njengoba inani elikhulu labantu kanye nokwehluka kwezakhi zofuzo.
Kuthiwani ngezimbila ePyrenees?
ESpain, ePyrenees, kuhlala imiphakathi yezimbila ezivela e-Alps yaseFrance. Lezi ziphinde zafakwa phakathi kuka-1948 no-1988 ngoba baqothulwa ePyrenees iminyaka engaphezu kwengu-15.000.
Ucwaningo lwakamuva lukhombisa lokho ukwehluka kofuzo kulezi zimbila kuncane impelaNgakho-ke, ngokwalokho engikushilo ngaphambilini, kuzoba nobunzima obukhulu futhi kuzoba uhlobo olusengozini kakhulu ngaphambi kwemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. Kakade iSpain yizwe, ngenxa yesimo sezulu salo, umnotho nendawo elikuyo, elisengozini enkulu ekuguqukeni kwesimo sezulu.
Ububanzi be-alpine marmot
Ucwaningo lwenziwe ngabaphenyi abavela ku Isikhungo Sokucwaninga Kwemvelo Nezicelo Zehlathi (i-CREAF-UAB) kanye neLabouratoire de Biométrie de Biologie Evolutive (LBBE) eLyon (eFrance). Kulokhu bahlaziye iDNA yezimbila zasePyrenean ngezinwele zabo.
Lapho ukwenziwa kabusha kwalolu hlobo kwenziwa ePyrenees, kwavuselelwa izinhlobo ezingaba ngu-400 ezazivela e-French Alps. Ngaphandle kokungahleleki nokuqapha (ngoba abanye babo bebengazi kahle ukuthi bavelaphi), ukuphindwaphindwa kwe-Alpine marmot ePyrenees kwaba yimpumelelo ngoba yasungula futhi yakha ikoloni masinyane cishe bonke ubuso baseningizimu bale ntaba.
Umsuka kanye nemiphumela yokwehluka okuphansi kofuzo
Abantu ababuyiselwe babenokwehluka okuncane kakhulu kofuzo. Lesi yisici esibaluleke kakhulu ukujwayela ukuguquka kwesimo sezulu kanye nezimo ezintsha esizivezayo. Imvamisa, ngaphezu kokuthathu kokuphindwaphindwayo kwehlulekile ngenxa yokushoda kwezifundo zangaphambilini, ekulandeleni okunganele okwalandela noma okwehlukaneni okuphansi kofuzo.
Iqiniso lokuthi inhlobo inokuhlukahluka okucebile kwezakhi zofuzo ibalulekile ngokujwayelekile ekuguqukeni kwemiphakathi nezinhlobo uqobo lwayo, kepha kubaluleke kakhulu lapho inani labantu lincane.
Kepha kungani ukuhlukahluka kofuzo lwabo kuphansi? Hhayi, njengabantu basePyrenees bengazange bashintshisane ngezinto zofuzo, idolobha ngalinye ePyrenees lisacishe lifane nedolobha lase-Alps.
Umbuzo kuphela osele owokuthi ngabe isikhathi sizokwazi yini ukusiza i-groundhog ukuthi ivumelane nokushintsha kwesimo sezulu noma ngabe kungenye enye ukwehluleka kokuphinda kufakwe. Ithemba lethu elisalele ukwehlisa nokumisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ukuze izimbila nezinye izinhlobo ezisongelwayo zibe nesikhathi esithe xaxa sokuzivumelanisa nezimo ezintsha ezizodalwa ukuguquka kwesimo sezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Imbila yasePyrenean isengozini ngenxa yokwehlukahluka kofuzo okuphansi
Isimo sezulu esinethemba lango-2016